प्राकृतिक विधिबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? - Nepaliraibar
प्राकृतिक विधिबाट उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ?
वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा। राजेन्द्र कोजु भन्छन्, ‘उच्च रक्तचापको अवस्था हेरेर औषधि खाने वा जीवनशैली परिवर्तन गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । यद्यपि औषधि सेवन गरेपछि स्वस्थ जीवनशैली भने अपनाउनैपर्छ ।’
उनका अनुसार यसको लागि सबैभन्दा पहिले उच्च रक्तचाप के कारणले भएको छ पत्ता लगाउनु पर्छ । जस्तो अन्य विभिन्न रोगहरुका कारणले रक्तचाप भएको छ भने सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या निको भएपछि यो पनि स्वतः निको हुन्छ । रक्तचापको यस्तो कारण १० प्रतिशत जति हुन्छ ।
बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रक्तचापको कारण हाम्रो खराब व्यवहार र चलनचल्तीका कारण हुन सक्छ । जस्तो, धेरै चिन्ता लिने, धुम्रपान गर्ने, नुन धेरै खाने मोटोपना जस्ता कारणले उच्च रक्तचाप बढेको हुन्छ । यसरी बढेको रक्तचाप शुरु भइसकेपछि नियमित औषधि खाएर मात्रै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ जीवनशैली सुधारेर यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्न ।
त्यसो त औषधि सेवन गर्नैपर्ने भएपनि जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अतः हामीले प्राकृतिक विधीबाट पनि उच्च रक्तचाप कम गर्न सक्छौं । साथै उच्च रक्तचापको जोखिमबाट आफुलाई मुक्त राख्न सक्छौं । यसका लागि केही यस्ता न्युनतम सर्त छ, जसलाई पालना गर्नैपर्छ ।
नुनको मात्रा कम
हाम्रो खानामा नुनको मात्रा बढी हुन्छ । तरकारी, अचार, दाल आदिको माध्यामबाट हामी नुन सेवन गरिरहेका हुन्छौं । यसको मात्रा घटाउनुपर्छ । नुनको मात्रा घटाउने एउटा गजब काइदा भनेको खानामा सलाद एवं उसिनेको सागसब्जी समावेश गर्नु हो । साथै अन्य नुनिलो अमिलो खानेकुरा, जंकफुड सेवन गर्नुभन्दा फलफूल सेवन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
प्रशोधित खानेकुरा निषेध गरौं
अहिले हामीसँग खानेकुराका अनेक विकल्प छन्, त्यसमा प्रशोधित खानेकुरा अत्याधिक छ । प्याकेटबन्द वा तयारी खानेकुरा पनि उच्च रक्तचाप बढाउने कारण हुन् ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्नका लागि खानपानमा सतर्कता अपनाउनै पर्छ । यस्तो अवस्थामा सन्तुलित खानेकुरा आवश्यक हुन्छ । साथै सुपाच्य पनि । दिनभर खाइने खानामा ति सबै पोषक तत्व सामेल भएको होस्, जो शरीरलाई आवश्यक छ ।
फलफूल र सागसब्जीलाई आफ्नो खानामा सामेल गर्नुपर्छ । मासु, दुधजन्य परिकार आदिको मात्रा कम गरौ । सलाद, हरियो सागपान, फलफूल, ड्राइ फ्रुट्स, ताजा सुप आदिलाई दिनभरको खानपानमा समावेश गरौं ।
चिनीजन्य, धेरै तेल भएको खानेकुरा सेवन नगरौं । रातो मासुको बदलामा कुखुरा वा माछा सेवन ठिक हुन्छ ।
खानामा फाइबरको मात्रा बढाउनुपर्छ । फाइबरले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने होइन । तर, यसले तपाईंको पाचन यन्त्रलाई चुस्त बनाउँछ । तपाईंलाई स्वास्थ्य राख्न मद्दत गर्छ । सागसब्जी खासगरी हरियो पत्तेदार सब्जीमा फाइबर हुन्छ । फलफूल, नट्स आदिमा पनि भरपुर फाइबर पाइन्छ ।
धेरैजसोको खानामा ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिड ९फिश आयल०को मात्रा कम हुन्छ । यसको आपूर्तिका लागि माछा सेवन गर्नुपर्छ । यद्यपी माछा तारेर होइन, उसिनेर सेवन गर्नु प्रभावकारी हुन्छ । त्यसो त ओमेगा थ्रि फ्याटी एसिडका लागि फिस आयल ट्याब्लेट पनि पाइन्छ । यद्यपी यस किसिमको ट्याब्लेट सेवन गर्नुअघि चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ ।
उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि खानामा पोटाशियमको मात्रा पनि बढाउनुपर्छ । धेरै मात्रामा पोटाशियम चाहि हानिकारक हुनसक्छ । त्यसैले सन्तुलित मात्रामा पोटाशियम लिनुपर्छ । गालभेडा, केरा, सिमी, प्याज, सुन्तला आदिमा पोटाशियम पाइन्छ ।
कतिपय घरेलु औषधी जो हाम्रो भान्सामा पाइन्छ, त्यसले पनि उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग गर्छ । यदि त्यस्ता औषधीको सेवन गर्ने हो भने चिकित्सकको परामर्शमा कसरी र कति मात्रामा खाने भन्ने कुराको टुंगो गर्नुपर्छ । जस्तो लसुन, बेसार, अदुवा आदिमा म्याग्नेसियम र क्रोमियम हुन्छ । यदि यी तत्वको आवश्यक भए चिकित्सकको परामर्शमा सेवन गर्न सकिन्छ ।
तनाव कम गर्नु गाह्रो लाग्नसक्छ । किनभने तनाव लिन नचाहेर पनि हामीलाई तनाव भइरहेकै हुन्छ । तनाव नियन्त्रण गर्नु भनेको तनाव व्यवस्थापन गर्नु हो ।
तनाव हरेकलाई हुन्छ तर त्यसलाई कसरी लिने रु यो मूख्य कुरा हो । हामी दैनिक व्यवहारमा अनेक कारणले तनावमा पर्छौं, तर तनाव लिनु कुनै समस्याको समधान होइन । तनाव लिएर कुनै समस्या हल हुँदैन ।
त्यसो भए किन तनाव लिने ?
कुनैपनि कुरालाई अलि सहज र सरल ढंगले ग्रहण गर्दा पनि तनाव कम हुन्छ । काम गरेको बेला रमाइलो गरौं । शरीरलाई आनन्द हुने कतिपय प्राकृतिक विधी छन्, त्यसलाई अपनाएर पनि तनाव कम गर्न सकिन्छ ।
प्राणायम, ध्यान यस्तो विधी हो, जसले तनाव व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । यस किसिमको अभ्यासले मनलाई शान्त तुल्याउँछ । प्रफुल्ल बनाउँछ ।
लामो सास लिने र छाड्ने प्रक्रिया पनि तनाव व्यवस्थापनको राम्रो उपाय हो । त्यस्तै नियमित रुपमा व्यायाम गर्ने गरौं । जथाभावी व्यायाम गर्नु चाहि ठिक हुन्न । बरु विहान एक घण्टा छिटो–छिटो पैदल हिँड्ने बानी गरौं ।
चुरोटको सेवनले उच्च रक्तचाप ह्वात्तै बढाउँछ । यसमा रहेको निकोटिनले उत्तेजक बनाउँछ । कफी, सोडा जस्ता पेय पनि उच्च रक्तचाप बढाउने कारण हुन् ।
किनभने यसमा क्याफिनको मात्रा बढी हुन्छ । क्याफिनले स्नायु प्रणालीलाई उत्तेजित बनाउँछ । चुरोट जस्तै मदिराजन्य पेयले पनि उच्च रक्तचाप बढाउँछ । उच्च रक्तचाप नियन्त्रणका लागि मदिरा छाड्नैपर्छ ।
शरीरको उचाई अनुसार तौल निर्धाण हुन्छ । यदि त्यस अनुरुप तौल बढी छ भने नियन्त्रण गर्नैपर्छ । अतिरिक्त तौलले पनि उच्च रक्तचाप बढाउन सघाउँछ । खानपानमा परिवर्तन गरेर वा शारीरिक श्रम गरेर तौल नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
भोकविरुद्धको सहायता अभियान जाजरकोटबाट शुरु
उपचारमा आएका पुरुषहरुको लिङ्ग देख्दा लाज लाग्छ
युवतीहरु किन युवतीसँग नै आकर्षित हुन्छन् ?
प्रेम विवाहपछि दुलाहा समलिङ्गी भएको खुलासा